Xaflad aad u balaadhan oo lagu qabtay dugsiga sare ee ilays hargeysa
xaflad lagu abaalmarinayay macalimiinta wax ka dhigta dugsiga sare ee ilays hargeysa
Xaflad aad u balaadhan oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda waxkabarata dugsigaasi ayaa abaalmarino ku gudoonsiiyay macalimiintoodii wax u dhigi jirtay, ardaydan oo iyagu ah kuwu sanadkan ka baxaya dugsiga ayaa waxay macalimiinta ku abaalmariyeen shahaadooyin (certificates) iyo koobab lagu xardhay magaca ilaahay (Allaah).
Xafladan oo lagu qabtay dugsiga markay taariikhdu ahayd 20 may 2008, ayaa waxa ka soo qayb galay macalimiinta dugsigaasi, ardayda hada waxkabarata iyo kuwii hore wax uga baran jiray. Waxaa halkaasi hadalo kale duwan oo dhinac kasta taabanaya ka jeediyay maamulaha dugsigaasi(Xasan Cabdi Jibriil) iyo macalimiinta iyaga oo marka koowaad uga mahadceliyay ardaya xafladan balaadhan ee ay u qabteen ee waliba shahaadooyinka lagu siinayo, iyo iyagoo kula taliyay in ay dadaalkooda halkaa ka sii wadaan maadaama ay dhawaan dugsiga ka qalin jabinayaan.
Xaflad tan la mid ah ayaa dhawaan loogu qaban doonaa hotelka imperial ardaydan ka qalinjabinaysa dugsiga hadii alle idmo, iyaga oo waliba lagu abaal marin doono shahaadooyinkoodii qalin jabinta.
Diyaarintii:: Ibraahin Maxamed Xasan
Ku soo hagaaji qormadaada emailkan: wardoon@live.com